Rehefa mihena ny tranga COVID-19 vaovao dia mety hisokatra amin'ny mpizahatany vahiny i Bali amin'ny volana oktobra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Indonezia » Rehefa mihena ny tranga COVID-19 vaovao dia mety hisokatra amin'ny mpizahatany vahiny i Bali amin'ny volana oktobra
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny minisitry ny fahasalamana tany Indonezia Budi Gunadi Sadikin dia nilaza fa ny fisokafan'ny vahiny dia miankina amin'ny 70% amin'ireo olona kendrena nahazo ny tifitra COVID-19 voalohany.
Mihetsika am-pitandremana i Indonezia mba hanokatra indray ny sisintaniny amin'ireo mpitsidika vahiny taorian'ny onja COVID faharoa nanimba.
Ny mpitsidika vahiny dia avela handeha hamangy amin'ny nosy fialantsasatra malaza any Bali sy any amin'ny toerana fizahan-tany hafa.
Ny fihenan'ny tranga COVID-19 any Indonezia dia nidina hatramin'ny 94.5% hatramin'ny tampon'ny tapaky ny volana Jolay
Ny minisitry ny fandrindrana ny raharaham-bahiny sy ny famatsiam-bola any Indonezia, Luhut Pandjaitan, dia nanambara fa ny firenena Azia atsimo atsinanana dia mamela ireo mpitsidika vahiny hiverina any amin'ny firenena amin'ny volana oktobra.
Indonezia mihetsika am-pitandremana mba hanokatra indray ny sisin-taniny aorian'ny onja COVID-19 faharoa mahatsiravina, nodoran'ny Delta miova amin'ny virus.
Saingy aorian'ny fikororohana maranitra amin'ny tranga COVID-19 dia mety afaka mivezivezy any amin'ny nosy fialantsasatra malaza manerantany ny mpizahatany vahiny Bali ary ny faritra hafa any Indonezia malaza amin'ny mpitsidika any ivelany.
Raha ny filazan'ny minisitra, ny fanampiana ireo tranga voamarina COVID-19 dia nilatsaka 94.5% hatramin'ny tampon'ny tapaky ny volana Jolay.
"Faly izahay androany fa ny tahan'ny fiterahana dia ambany noho ny 1… Ity no ambany indrindra mandritra ny areti-mandringana ary manondro fa voafehy ny areti-mandringana," hoy i Luhut.
Nisy fambara tsara hafa koa nahitana ny tahan'ny fipetrahan'ny hopitaly nasionaly nilatsaka ambany 15%, raha ny taha positivity, na ny habetsahan'ny olona voasedra izay miabo, dia latsaky ny 5%, hoy ny minisitra.
Nilaza i Luhut fa raha izao no mitohy ny fironana dia “matoky tanteraka izahay” fa afaka hisokatra i Bali amin'ny volana oktobra.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nilaza ny minisitry ny fahasalamana ao Indonezia Budi Gunadi Sadikin fa ny fisokafana amin'ny vahiny dia miankina amin'ny 70% amin'ireo olona kendrena nahazo ny tifitra COVID-19 voalohany.